Shiinaha Granite Stone guga Xudunta Mashiinka Mashiinka iyo alaableyda | Kordhi
Mashiinka Mashiinka Xudunta Dhagxaanta Dhagxaanta
Qalabka wax lagu jajabiyo waa qalab sare ama sare oo wax lagu jajabiyo oo loo isticmaalo burburka alaabta ceeriin ee metallurgy, naqshadaha, dhismaha waddooyinka, kiimikada, iyo warshadaha silica. Burburiyaha Kondhada waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu burburiyo macdanta-adag ama adag iyo dhagaxa. Waxaa loo qaybin karaa dhowr nooc, Burburiyaha koorta guga, Symons cone jajabiyaha, qalabka wax lagu jajabiyo ee koontaroolka iyo qalabka wax lagu jajabiyo ee korontada ku shaqeeya.
Nooca caadiga ah (PYB) waxaa loo adeegsadaa burburin dhexdhexaad ah, nooca dhexdhexaadka ah waxaa loo adeegsadaa burburin dhexdhexaad ah ama ganaax ah iyo nooca madaxa oo gaaban waxaa lagu mariyaa burburin fiican. Marka loo eego baahida shaqo ee loo yaqaan 'Cone crusher', qalabka wax lagu jajabiyo ayaa si xoog leh u adeegsanaya xoogga cadaadiska ah oo aan ka weyneyn 300Mpa nooc kasta oo macdan ah iyo dhagax ilaa burburin dhexdhexaad ah iyo jajabyo jajab ah. iyo jajabka jajaban.waxaa si ballaaran loo adeegsadaa.waxay leedahay jaangooyooyinka saamiga hoos udhaca sare, waxsoosaarka sare ,, budo yar ayaa luntay, granularity-ka waxsoosaarka xitaa, iswaafajin adag oo hadhuudh adag.
Matoorku wuxuu wadaa darafta gacanka si uu ugu wareego mashiinka gudbinta iyo qalabka. Oo safka koorta dhaqaaqaya wuxuu ku wareegayaa hoosta duurka. Qaybta wareejinta koorta dhaqaaqa ee u dhow xargaha koontaroolka ee ma guurtada ah ayaa noqota daloolka burburka, maaddadana waa la jajabiyaa inta u dhexeysa wareegga koonto dhaqaaqa iyo go'an. Marka koorta dhaqaaqeysa ay ka baxdo qeybta, sheyga ku jabay cabirka walxaha loo baahan yahay wuxuu ku dhacayaa culeyskiisa wuxuuna ka soo baxayaa salka hoose ee koorta.
Baaxadda kala duwanaanta cabirka wax soo saarka
(r / daqiiqo)
Tayo isku mid ah iyo qeexitaan, waxaan bixinaa qiimo hoose！
Qiimo isku mid ah, waxaan ku soo bandhigi karnaa tayo wanaagsan iyo dayactir!
1.Dhammaan qaybaha ugu muhiimsan waxay qaataan noocyo ugu fiican. Saxanka birta wuxuu ka yimid Bao Steel, China No.1 company steel. Xayeysiintu waxay ka timid sumcadda caanka ah ee Shiinaha ee ZWZ iyo Timken oo ka timid dalka Sweden. Qaybaha ugu muhiimsan ee xiran ee xargaha xargaha iyo mashiinka weelka ayaa qaata Mn13Cr2 ama Mn18Cr2 iyadoo kuxiran baahida macaamiisha. Mashiinka waa sumcadda caanka ah ee Shiinaha ee LUAN, ama waxaan ku siin karnaa Siemens motor haddii macmiilku u baahdo.
2. Qaab dhismeedka sheyga waxsoosaarka wanaagsan iyo qayb-xidhka ayaa aad u yar, kharashka hawlgalkuna aad buu u hooseeyaa.
3. Awood sare iyo tayo wanaagsan
4. Soo-saar sare, adeegsi-kharash yar, qaab-dhismeed isukeensan, hawlgal fudud, dayactir yar iyo heerka isticmaalka sare.
5. shaybaarka labyrinth wuxuu hubiyaa in saliida haydarka aan la wasakheyn karin oo saliiduhu si siman u noqon karo.
Hore: Nuurad Dhuxul ah Glass Hammer burburi Mill Machine
Xiga: Nuuradda Rock Stone Jaw Mashiinka Xashiishka
Waxyaalaha Dhuxul Qoyan Burburinta Burburinta Labaad
Siman Iyo Ilkaha Nooca Double Rullaluistemadka Burburi
Nuurad Dhuxul ah Glass Hammer burburi Mill Machine
Nuuradda Rock Stone Jaw Mashiinka Xashiishka
Dhagaxa Dhagaxa Dhagaxa burburiyey Qaybo ka mid ah Daamanka Saxanka
Ciida Samaynta Xadgudubka Saamaynta Saamaynta Sanduuqa
Nuuradda Rock Horizontal usheeda dhexe Sand Samaynta Cru ...